Mpanamboatra sy Ozinina Multiaxial tsara indrindra |Tongli
Ny manipulator multiaxial dia manipulator misy tanjona maro izay afaka mahatsapa ny fanaraha-maso mandeha ho azy, ny fandaharana azo averina, ny fahalalahana maro, ny fahalalahana mihetsika ary ny fifandraisana amin'ny zoro havanana amin'ny habaka. ny X, Y, ary Z.
1. Hetsika fahafahana;2. Fanaraha-maso mandeha ho azy sy fandaharana azo averina;3. Flexible amin'ny fiasa samihafa araka ny fitaovana miasa samihafa;4. Ny fahamendrehana avo lenta, ny hafainganam-pandeha avo lenta, ny mazava tsara.
Amin'ny maha-rafitra rafitra mora sy tsotra ho an'ny vahaolana rafitra robot mandeha ho azy, ny manipulators multi-axis dia azo ampiasaina amin'ny famoahana, fandrotsahana plastika, famafazana, palletizing, fanasokajiana, fonosana, lasantsy, fanodinana metaly, fikirakirana, fampidinana ary fampidinana, fivoriambe indostrialy mahazatra Ny sehatry ny famokarana toy ny, fanontam-pirinty, sns., dia manana lanja fampiharana manan-danja amin'ny fanoloana ny asa, fanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana ary ny fanamafisana ny kalitaon'ny vokatra.Ho an'ny fampiharana samihafa, misy fepetra famolavolana samihafa ho an'ny manipulators multi-axis, toy ny fifantenana fomba fifindran'ny samy hafa araka ny fepetra takian'ny marina sy ny hafainganam-pandeha, ary ny fisafidianana fitaovana clamping samihafa (fixtures, grippers, ary mounting frame, sns) ho an'ny asa farany. lohany araka ny dingana manokana fepetra, ary koa ny famolavolana safidy ho an'ny fampianarana fandaharana, mandrindra toerana, fahitana maso sy ny fomba fiasa hafa, mba hahafahany mahafeno ny fepetra takiana amin'ny sehatra samy hafa sy ny toe-javatra samy hafa miasa.
Ny robot multi-axis dia robot amin'ny tanjona ankapobeny miaraka amin'ny bika aman'endriny sy rafitra.Ny fitambarana tsirairay dia misy fitaovana fanamafisam-peo avo lenta.Ny hafainganam-pandehan'ny fiaraha-miombon'antoka avo dia afaka manao asa moramora.Izy io dia afaka manao asa toy ny fikarakarana, palletizing, fivoriambe, ary famolavolana tsindrona.Fomba fametrahana.
Ny fampiharana lehibe dia toy izao manaraka izao
(1) Fikarakarana fitaovana sy fametahana pallet (2) Fonosana sy fanangonana (3) Fitotoana sy fanosehana (4) Fikarakarana tamin'ny laser (5) Fanodinana amin'ny toerana (6) Famolavolana tsindrona (7) Fanapahana/deburring
●Adopt ny firafitry ny servo maotera sy ny reducer, miaraka amin'ny hery mitondra hery, asa lehibe isan-karazany, haingana haingana sy avo mazava tsara.
●Ny manipulator rafitra fanaraha-maso dia tsotra sy mora ianarana, izay tena mety amin'ny fampiasana famokarana.
●Ny vatan'ny robot dia mampiasa tariby anatiny ampahany, izay azo antoka sy ara-tontolo iainana.
Manipulator misy clamp
a) Ny manipulator manampy sandry mafy mitovy dia afaka mandanjalanja lanja isan-karazany manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 500kg.
b) Ny fanodikodinam-pahefana dia voaforon'ny mpampiantrano fifandanjana, fitaovana fitanana ary rafitra fametrahana.
c) Ny mpampiantrano manipulator no fitaovana lehibe izay mahatsapa ny toetry ny fitaovana (na workpieces) tsy misy gravité eny amin'ny rivotra.
d) Ny manipulator dia ny fitaovana mahatsikaritra ny fisamborana ny workpiece ary mameno ny fepetra takian'ny mpampiasa sy ny fikarakarana mifanaraka amin'izany.
e) Ny firafitry ny fametrahana dia mekanika izay manohana ny andiana fitaovana iray manontolo araka ny faritry ny serivisy sy ny toetry ny tranokala.
teo aloha: Manufacturer for Engineering Vehicle Manipulator - Gantry Manipulator - Tongli
Manaraka: Truss Manipulator
3 Axis Manipulator
4 Axis Manipulator